Shariif Xasan oo aan ahayn dagaalooge oo mustaqbalka u qorsheysan C/llahi inuu codka kalsoonida ah uga tuuro xilka gudoomiyenimada baarlamaanka
Gudoomiye Shariif Xasan ayaa siyaasadiisa waxey la soo baxday degenaansho la’aan. Shariifka ayaa wuxuu ka soo jeeda beelaha degan Bay, wuxuuna sidaas ku helay xilka gudoomiyenimada baarlamaanka. Shariifka ayaa waxey dantu biday inuu dib ugu noqdo kasbashada taageerada dadka uu ka soo jeedo. Arrintaasna waxaa ku dhalisay kadib markii uu wax culaaba ku yeelan waayey kooxda Muqdisho iyo Jowhar.
Si Shariifka loogu hirgeliyo riyadiis ayaa waxaa fursad u noqotay shirka xubnaha baarlamaanka in lagu qabto Baydhabo, arrintaasna waxey gorgortan gelisey mabaadi’dii uu Shariifku ka wadey Muqdisho iyo isbaheysigii siyaasadeed ee uu la lahaa hogaamiyeyaasha Muqdisho.
Waxaa cad in Shariifka loo soo xilsaaray inuu kala jebiyo mucaaradka Muqdisho iyo inuu rido dowlada Prof. Geeddii. Shariifka ayaa hirgelinta arrimahaas wuxuu la taliye uga dhigtay mudane Qanyare oo labadooduba ay ciil badan kala kulmeen xadgudubyadii ka soo gaarayey wasiirka kowaad, kaas oo dhaqaalahooda iyo sharfkoodaba dhulka dhigay.
Dowlada Itoobiya iyo C/llahi waxaa ka go’an in Shariifka marka lagu fuliyo danaha laga leeyahay oo uu ugu horeeyo shirka Baydhabo iyo xil ka qaadida xubnaha dowlada ee ka soo jeeda Muqdisho in isna markiisa laga horkeeno xubnaha ka soo jeeda Muqdisho ayna keenaan codka kalsoonida in loo qaado, sidaasna jagadiisa lagu majaxaabiyo, laguna bedelo dagaalooge ka soo jeeda Bay haddana ah taageerayaasha Itoobiya.
Shariif Xasan taageerada uu ka raadinayo Bay waa mid uusan meelna ku gaareyn waayo beel ahaan uma arkaan iney asal ahaan ka soo jeedaan, waxeyna ka jeclaan lahayeen hogaamiyeyaasha kale oo sinji ahaan ka soo jeeda beelahooda.
Shariifka waxaa u sabab ahaa xilka uu maanta hayo codkii badnaa ee uu ka helay beelaha degan Muqdisho, haddii siyaasadiisu ay u rogmato dhinaca C/llahi, waxaan shaki lahyn in labada dhinacba aysan ka cafin doonin galgalashadiisa siyaasadeed, cod midana ay ku tuuri doonan marka ugu horeysa oo ay helaan fursadaas.